Hagaha, Qiyaasaha iyo Qalabka si loogu abuuro sawirro shabakadaha bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Weligaa ma ka fikirtay sawirka shirkaddaada oo maxaad ku isticmaashaa shabakadaha? Weligaa ma isweydiisay inay sax tahay iyo in kale? ama kaaga sii darran, miyaadan haysan wax sawir ah oo kuu aqoonsanaya? Jawaabaha su'aalahan iyo kuwa kale ee soo bixi kara waa kuwo ku habboon in la ogaado haddii aan runti siinno isticmaaleyaasha sawir sax ah, haddii ay la xiriirto howlaha shirkadda, haddii ay tahay mid tayo leh, iwm.
1 Waa maxay muhiimadda muuqaalka shirkadda ee shabakadaha?
2 Sidee loo abuuraa sawir wanaagsan shirkaddaada?
3 Qalab bilaash ah si aad u hesho sawirro wanaagsan
Waa maxay muhiimadda muuqaalka shirkadda ee shabakadaha?
Sawirka waa qayb muhiim ka ah aqoonsiga shirkaddaada, tani waa in marka hore ay ahaato mid tayo fiican leh, markaa waa inay si toos ah ula xiriirtaa ama lagu aqoonsadaa waxqabadkaaga, waa hab lagu kala sooci karo naftaada kuwa kula tartamaya waana hubaal inay tahay aragtida ugu horeysa ee ay isticmaalayaasha shabakadu qaadan doonaan.
Sidee loo abuuraa sawir wanaagsan shirkaddaada?
Waxaan kuu helnay xoogaa macluumaad iyo talo ah si aan kaaga caawino inaad hesho a sawir ku habboon warbaahinta bulshada, sida loo abuuro, waa maxay cabirka la tilmaamay iyo qalabka qaar si loo gaaro, haddaba fiiro gaar ah u yeelo.
Sawirka daboolka ee shabakadda bulshada waa inuu ahaadaa sida ugu macquulsan, ha iloobin inay tahay aragtida koowaad iyo waxa aad rabto inaad ka gudbiso halkaas waa inay ku jiraan oo keliya macluumaadka ugu yar ee lagama maarmaanka ah laakiin ku filan awood leh taasna waxay u horseedaa isticmaalaha inuu isla markiiba la xiriiro shirkadda, markaa xusuusnow, ka yar ayaa ka badan.
Horey ayaan uga warqabnay sida sawirka uu ahaan lahaa, aan ka fikirno fariinta aan rabno inaan gudbino tanina waa inay noqotaa mid sax ah, oo leh ereyo yar ama weedho gaagaaban oo muujinaya sheyga oo aan lahayn macluumaad xad dhaaf ah, oo ku martiqaadaya shabakadahaaga kale ama websaydhka, laakiin had iyo jeer xooga saaraya fudeydka iyo nadaafadda.
Sawirada, taas oo hubaal ku kala duwanaan doonta alaabada ama adeegga, Waxaan ka heli karnaa adeeg xirfadle qandaraasle ah ama bangiyada sawirka, runtu waxay tahay iyadoo kuxiran badeecada sawirada waxay noqon karaan kuwa miyir qaba, oo leh midabyo yar, kuwa badanna leh, oo gudbiya fariimaha xasiloonida ama firfircoonida, iyo waxyaabo kale oo badan
Waxaan had iyo jeer u imaan karnaa kuweenna hal-abuurnimo iyo mala-awaal Marka ay timaado bixinta qaab-dhismeedka sawirka aan dooneyno, kaas oo sidoo kale gacan ka geysanaya kala-soocidda noocyada kale oo na siinaya aqoonsiga la doonayo, tani waxay noqon kartaa kiiska marka sawirku uusan si fiican ugu habboonayn daboolka la abuurayo.
Waxaan xusi doonnaa xoogaa qalab bilaash ah oo adiga waxtar kuu yeelan doona si aad ugu abuurto sawirro wanaagsan oo tayo leh shirkaddaada shabakadaha, sidaa darteed fiiro gaar ah u yeelo.
Qalab bilaash ah si aad u hesho sawirro wanaagsan
Waxay u shaqeysaa inay abuurto dhammaan noocyada sawirada, oo ay ku jiraan kuwa shabakadaha bulshada maaddaama ay ka kooban tahay arrimo iyo talooyin kale oo lagama maarmaan u ah in la sudho sawirka cabbirka ugu habboon, waxay ku siinayaan ikhtiyaar si aad u awooddo keydi sawirrada horey loo soo xulay iyo inaad adigu dib u isticmaasho markasta oo aad rabto, sidoo kale waxay ku qoran tahay Isbaanish.
Qalabka waxaa laga helaa shabakada ama codsi ka kooban iPad-kaaga, kaliya waa inaad dhameystirtaa nidaamka diiwaangelinta.
Xoog badan qalabkan oo aad sidoo kale kuheli karto bilaash iyo a habka diiwaangelinta.
Marka loo eego Canva kani ma haysto arrimo badan laakiin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirada ka sameysato moobilkaaga, kaniiniga ama kombiyuutarkaaga Naqshad isku mid ah ayaa lagu hagaajin karaa cabbirka si loogu dhigo shabakadda ama goobta aad dooratay, waxaad sidoo kale sameyn kartaa fiidiyoowyo firfircoon oo leh qoraallo, taas oo lagu daro tixgelin.
Qalabka adeegsiga xirfadeed, Barnaamijkeedu ma aha mid bilaash ah, hase yeeshe waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan marka ay timaado abuurista sawirro tayo sare leh marka ay timaado sawirrada.
Shaki la'aan mid kale qalab horumarsan, si ballaaran loogu isticmaalo ku guuleystaan ​​sawirro leh qaabab fidsan iyo qoraal runtii tayo xirfadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Hagaha, Qiyaasaha iyo Qalabka si loogu abuuro sawirro shabakadaha bulshada